सरस्वती पाण्डे 'सरस'/सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा गाई काण्डको समाचार देख्दा केही लेख्न मन लाग्यो । उपसभामुख राधिका तामाङले गाईको मासु खान पाउनुपर्छ भन्ने समाचारले एकाएक हंगामा मच्चायो । उपसभामुखले भने गाई काटेर खानुपर्छ भन्ने भनाई नभनेको बताएकी छन् । उनले समाचारको खण्डन समेत गरेकी छन् । उनलाई कसैले
के आर पाण्डुलिपि/अहिले एक विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ, विषय हो– गाई काटेर खानुपर्छ । जताततै यसको चार्को बहस चलेको देखिन्छ । यस विषयको कोही पक्षमा त कोही विपक्षमा आफ्ना मत राखेको देखिन्छ । केही भने यी दुबैभन्दा माथि उठेर बोलेको पनि देखिन्छ । धर्मनिरपेक्ष भएको देशमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर
मधेशी दलःकुर्सी बलियो कि जनता ?
सुजन देवकोटा , मुलुकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार बनेको छ । सरकारलाई बहुमतको कुनै खाँचो छैन् । आखिर जसरी वामगठबन्धनले जनतालाई बहुमत दिनोस् विकास दिन्छौ भन्ने वाचा गरेका थिए । त्यही प्राप्त भएको छ । ७ ओटै प्रान्तका सरकार पूर्ण रुपमा ५ वर्षे कार्यकालका लागि सुरक्षित छन् । प्रदेश
द्वन्द्वमा मानवीय संगठनहरूको भूमिका
डा.बाबुराम भट्टराई /समाजका कुनै पनि द्वन्द्व वा संकट सुरुमा राजनीतिक नै हुन्छन् । यसको समाधानका लागि मूल समस्या के हो भन्ने पत्ता लगाउनुुपर्छ । र, यसको मूल कारण खोतल्नुपर्छ । नेपालका शासकहरूले लामो समयसम्म एक दशक लामो सशस्त्र क्रान्तिलाई सुरक्षा चिन्ताको रूपमा मात्रै लिए । त्यसैले समाधानका रूपमा विद्रोहीमाथि
सरस्वती पाण्डे/ नारी दिवसको दिन सामाजिक सञ्जाल, मिडियामा नारीको प्रशंसा र महत्वका कुरा भए । यस्ता कुराले भरिभराऊ भए । जसमा पुरुषले ज्यादा प्रशंसा गरेको देखियो । पढेकी श्रीमतीले जागिर खान खोज्दा हुन्न भनेर बाहिर निस्किन नदिने पुरुषले पनि नारीको गुणगान गाएको देख्दा खुसी लाग्यो । व्यवहारमा नारीको सम्मान
प्रधानमन्त्री ज्यू, नमस्कार । केही दिन अगाडिसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भन्दै थिएँ । बेलुका टीभी खोल्दा तपाईं प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएछ । अचम्म लाग्यो ! भलै, यो आश्चर्य मान्नुपर्ने विषय थिएन किनकी चुनावी नतिजापछि सबैको मूल्यांकन केपी ओली फेरि देशमा प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने नै थियो । प्रधानमन्त्री
अपराध न्युनीकरणको प्रयास
सरस्वती पाण्डे ‘सरस’ रुपन्देहीको देवदहमा गुण्डा नाइके मनोज पुन मारिएपछि यसको सर्वत्र चासो भएको छ । यसले अपराध न्युनिकरणमा सहयोग पु¥याएको छ भन्ने तर्कहरू पनि गरिएका छन् । संविधानको मौलिक हकमा रहेको स्वतन्त्रताको हकलाई धेरै स्वतन्त्र बनाएर जताततै आफ्नो आधिपत्य जमाउँदै धेरै मानिसलाई डर र
केदारनाथ नेपाल 'निश्चल'/गत असोज १७ गते एमालेको नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको घोषणासँगै त्यसले राजनीतिक वजारलाई तताएको थियो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लगत्तै एकता हुने भनिए पनि लामो समयसम्म एकता नभएको कारण कतिपय एमाले ( माओवादी कार्यकर्तामा एकता हुने–नहुने अन्यौलता कायम थियो । तर ढिलै भएपनि फागुन
लालबाबु जस्तो मन्त्री किन नहुने ?
सरस्वती पाण्डे ‘सरस’ /नेपाली राजनीतिमा सबै नेताहरू नराम्रा छैनन् । केही नेताहरू देश र जनताका लागि सोचेर काम गरेको देखिन्छ । तर त्यस्ता नेताहरू भने औंलामा गन्न सकिने मात्रै छन् । डा.बाबुराम भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित, जनार्दन शर्मा आदिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हाल्दा
मधुसूधन ओझा, नेपालमा निकै आकर्षक मानिएको दक्षिण कोरियाली जागीर उत्तिकै जोखिमपूर्ण र मजदूरमारा पनि छ । इपिएसको खराव नीतिका कारण कोरियामा प्रवासी मजदूर दिनप्रतिदिन पीडित बन्दै गएका छन् । कोरियामा काम गर्न आउने प्रवासी मजदुरको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ । संख्या बढेसँगै समस्या पनि चूलिएका छन् । इपिएसमा
नयाँ सरकारसँग जनअपेक्षा
न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ/मुलुक यतिखेर औपचारिक रूपमा संघीयताको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । अहिले प्रादेशिक संरचना संचालनमा आइसकेको र प्रदेशसभाको बैठकहरू समेत सुरु भैसकेका छन् । सरकारले सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित मन्त्रालयको संरचना र करिब तीन हजार कर्मचारी प्रदेशमा आवश्यकता रहेको जनाएता
–अभिषेक जोशी शिखण्डी शिखण्डी हिन्दु पौराणिक पात्र मात्रै हैन; मानव समाजको प्रवृत्ति अनि व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको लालचमा आफूलाई अरू कसैका लागि प्रयोग हुन दिने । महाभारतको कथाले त्यस्तै संकेत गरेको छ । सो कथामा शिखण्डीको स्वार्थ हुन्छ भीष्मको मृत्यु । पाण्डवहरूको स्वार्थ थियो, भीष्मलाई युद्ध
प्रेमपत्र : केवल तिमीलाई मात्र...
पृथक दाहाल/प्रिय मुटु कहाँबाट सुरु गरौं जिन्दगीको रोचकता ? न सुरु गर्न सहज छ न अन्त्य गर्न । आज प्रणय दिवस, जिन्दगीका असिमीत संघर्षहरू लछार–पछार पार्दै, उठ–बस गराउँदै यहाँसम्म ल्याएको छु । यसको कारण प्रणय दिवस होइन । आजको दिन विशेष दिन हो । माया गर्न कुनै दिन पर्खनु पर्दैन मलाई थाहा छ । मभन्दा बढी
'पहिलो प्रेम भुल्न सक्दिन'
पुजा पराजुली/माया उनको नाम हो । आज म उनै मायालाई भेट्न् माया कै प्रस्ताव लिएर सधैंभरी आफ्नो बनाउन जाँदैछु । साँच्चै, आज एउटा इतिहास लेखिंदैछ मेरो जीवनमा पनि । भाग्यमानीको भुतै कमारो भन्ने लोकोक्ती जस्तो धेरै ‘लक्की’ भएपछि यस्तै हो । जसलाई प्रेम प्रस्ताव लिएर भेट्न् जाँदै छु उसैले बोलाएकी छ उसैको
यात्रा एक उपलब्धि अनेक
–रमेश दवाडी, अहिले गाउँमा नयाँ बस्ती पुननिर्माणमात्र होइन गाउँ–गाउँमा सडक सञ्जाल जोडिएको छ । यसले कतिपय स्थानमा भूक्षयको अवस्था समेत निम्त्याएको छ । छिट्टै कालोपत्रे भएमा जनता सडकमा सर्रर्र...गुड्न पाउने थिए । पुननिर्माणले फेरिदै गाउँ २०७२ सालमा भूकम्प याद आउदा अहिले पनि मन झस्किन्छ, अत्याश
ओलीको अवसर मोदीको बाध्यता
अभिषेक जोशी, यथार्थ के हो भने, एमालेलाई बाहिर राखेर सरकार बनाईन्छ भने त्यस्तो सरकारले भारतीय स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । ढिलै सहि तर यतिखेर उसले यस सत्यलाई बुझेको जस्तो देखिन्छ भारतले । यसैकारण, यतिखेर केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा काँडाको सट्टा फुल रोप्ने प्रयास भईरहेको छ भारतबाट
वाम एकताको गाँठो कसरी कस्ने ?
माओवादी केन्द्का अध्यक्ष प्रचण्ड जनयुद्धबाट सार्वजनिक भएदेखि नै ‘चमत्कार’शब्द बारम्बार प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनले वाम एकता गर्दा नयाँ चमत्कार हुने भनेको पनि ३ महिना बित्न लाग्यो । तर, वाम गठवन्धनको गाँठो जति कसिलो हुनुपर्ने हो त्यस्तो
वाम सरकारलाई रित्तो ढुकुटी उपहार
अभिषेक जोशी, ५ वर्षसम्म स्थायी वाम गठवन्धन सरकार बन्ने करिब पक्कापक्की भएर होला कांग्रेस आफ्नो अन्तिम सत्ता मोह पूरा गर्न अनेक तरहले लागि परेको छ, उसको निर्णयले मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा असर पार्ने तर्फ सोचेको देखिदैन् । माघ १५, मौसम चिसो छ, यतिखेर । तर, काम चलाउ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको
भ्रष्टाचार जिन्दावाद !
अभिषेक जोशी, भ्रष्टाचारको मुख्य कनेक्सन राजनीतिसँग जोडिएको छ । लाभदायी पदका लागि नेतृत्वको चाकडी गर्ने र त्यस्तालाई नेतृत्वले संरक्षण गरेर राख्नु नै आजको विडम्बना हो । हरेक सरकारी कार्यालय निकाय र नियोगहरु भ्रष्टाचार मुक्त छैनन् । चीन चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ सत्तामा आएपछि भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका
कुन गुलामीबाट ग्रस्त छन् आङकाजीहरु
– अभिषेक जोशी सरकारले यो वर्ष औपचारिक रुपमा राष्ट्रिय एकता तथा पृथ्वी जयन्ती मनायो । यसले केहीहदसम्म भएपनि सकारात्मक सन्देश दिन खोजेपनि केही व्यक्तिले विरोध स्वरुप कार्यक्रम गरेर पृथ्वीनारायण शाहप्रतिको अनादर सावित गरिछाडे । किर्तीपुरमा आङकाजी शेर्पाले पृथ्वीनारायण शाहको एकता अभियानका पीडितहरु
पृथ्वीनारायण शाहः नायक कि खलनायक
–अभिषेक जोशी, युद्धको समयमा भएका एकाध अमानवीय घटनाहरुलाई समातेर; दोस्रो विश्व युद्धपछि अस्तित्वमा आएको मानव अधिकारको चस्मा लगाएर जसले पृथ्वीनारायण शाहको विश्लेषण गर्छ उसको दृष्टिकोणमा उनी खलनायक हुनसक्छन् तर, तत्कालीन समयको राजनीतिक अवस्था अनुसार जसले उनको विश्लेषण गर्छ उसको लागि उनी नायक
एउटा ‘कार्यकारी’ पद चाहिन्छःप्रचण्ड
काठमाडौं २९। मंसिर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष केपी ओली बीच सरकार गठनबारे औपचारिक छलफल सुरु भएको छ । शुक्रबार दुई नेताहरुबीच भएको वार्ताका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्व सहमति अनुसार पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एक कार्यकारी पद आफूले पाउनु पर्ने अडान दोहोर्याएका
मर्नु अगाडी नै आफुनो चिहान बनाउने चलन
Chandra Dip Rai, मर्नु अगाडी नै आफुनो चिहान बनाउने चलन थाइल्याण्डको उत्तरी पहाड Pixang hill भन्ने ठॉउमा छ/Tao Association Organization भन्ने धार्मिक संस्थामा आबद्द हूनु पर्छ र यो चिहान बुकिङ गर्नु थाइल्याण्डको पैसा ३० हजार नेपाली पैसा १लाख२० हजार तिर्नु पर्छ/ जून सुकै देशको नागरीकले पनि चिहान बुकिङ गर्नु पाउछ/यहॉ देखिएको अक्षर लेखिएको
कुलतमा फस्ने युवाको ग्राफ वढ्दो,झुम्म बनाउने औषधि चाहियो भनेर हैरान बनाउँछन्
स्याङ्जा घर भएकी बबिता भट्टराईले अभिभावकको सल्लाहमा नै फार्मेसी पढिन्। मेडिकल क्षेत्रितिरको लगाव देखेर परिवारले हौसला दिएपछि उनले फार्मेसीमा डिप्लोमा समेत गरिसकिन्। औषधि बिक्री गर्न थालेको एक वर्ष मात्रै भएको छ। उनी मीनभवनस्थित मेडिकल स्टोरमा काम गर्छिन्। उनले सुरुमा अल्का अस्पतालमा एक महिना स्वयंसेवी
नेपाली चलचित्रको इतिहास वर्तमान र भविष्य
चलचित्र श्रब्यदृश्य मनोरञ्जनात्मक साम्रग्री हो।जसले जनमानसमा चेतनाको स्तर वृद्धि गराउदछ।फ्रान्सबाट सुरु भएको फिल्मी इतिहास अहिले बिश्वभरमा निकै ब्याबसायिक हुदै गएको छ। लभ स्टोरी चलचित्र ,अयाक्सन चलचित्र,एतिहासिक एबम धार्मिक तथा बैज्ञानिक चलचित्र लागायत फरक फरक बिषयबस्तुमा चलचित्र निर्माण भएको
गाउँमा बुढाबुढी मात्रै बस्छन्। आमाको फोनमा दिदी, नाति–नातिना र मेरो फोन नम्बर सेभ छ। तर आमाले नम्बर चिन्ने कुरै भएन। नम्बर देख्यो कि डायल ग¥यो, जसलाई लाग्छ–लाग्छ। आमाको फोन डायल गर्ने तरिका। त्यसरी नम्बर डायल गर्दा कहिलेकाहीं मलाई पर्दोरैछ। हेलो भनेपछि स्वर सुनेर आमाले ‘बाबु होस्’, भनेर माया दोहो¥याउँछिन।